मैले औषधि विज्ञानको कुरा गर्दा कतिपय मान्छेलाई चित्त दुख्छ – प्रधानमन्त्री « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
मैले औषधि विज्ञानको कुरा गर्दा कतिपय मान्छेलाई चित्त दुख्छ – प्रधानमन्त्री
इतिहास, इतिहासका मर्महरू वा हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई नबुझीकन अथवा त्यो प्रकृतिलाई हाम्रा पूर्वजहरूले कसरी चिनेका– प्रयोेग गरेका थिए रु त्यसको परख गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । हाम्रा पुर्खाहरू यस्ता इनोभेटिभ (नवप्रवर्तक) थिए जसले नचाखेको कुनै रूख बिरुवाको जरा, पात, बोक्रा, पूmल, फल पनि छैन । यसैकारण रस, गन्थ, स्वाद, गुण, पाकमा केके हुन्छ भन्ने प्रयोग गरेका छन् । धन्वन्तरी, चरक संहिता, अश्विनीकुमार अथवा पतञ्जलि जे सम्झनुहोस्– हजारौँ वर्षको एउटा औषधि विज्ञानको आफ्नो परम्परारही आयो ।
एउटा मात्र हाम्रो कमी थियो । त्यसलाई आयुर्वेदमा अभाव भन्न मिल्दैन । ‘मेसिन’ एलोपेथिक होइन, मेसिन मानवनिर्मित यन्त्र वस्तु हो, चाहे एलोपेथिक वा आयुर्वेदले प्रयोग गरोस् । त्यसकारण हामीले प्रयोग/परीक्षणका लागि मेसिनको प्रयोग गर्नु आयातीत होइन, विकसित वस्तु हो । प्रयोगशाला (ल्याब­­) हरू विकसित हुन् । जसले प्रयोग गरेर अनुभव हासिल गर्छ, त्यही हो विधि । एलोपेथिकबाट वा ल्याबबाट सापटी लिएको भन्ने कुरा गर्ने होइन ।
कसरी हामी मेडिसिन उत्पादन गर्न सक्छौँ, कसरी हामी मेडिसिन प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो । मेसिन आयुर्वेदले पनि प्रयोग गर्न सक्छ, अरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । मेडिसिन (औषधि)को विधि मात्रै एलोपेथिक, आयुर्वेदिक हो । मेडिसिन उत्पादन गर्ने विधि अलग कुरा हो । कसरी हामी मेडिसिन उत्पादन गर्न सक्छौँ, कसरी हामी मेडिसिन प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो । प्राकृतिक हिसाबले प्राप्त गर्छौं भने आयुर्वेदिक हो । आर्टिफिसयल (कृत्रिम) ढङ्गले उत्पादन गर्छौं भने एलोपेथिक हो । त्यो मात्रै फरक हो अरू मेसिन, औजार, ल्याब, इक्युपमेन्ट, एक्सरे सबै कुरा एलोपेथिक होइनन् ।
यो आयुर्वेदिक भनेको प्रयोगशाला नभएको, ‘एक्स रे’ नभएको भन्ने गरिन्छ । एक्स रे भन्ने चाहिँ कहाँ एलोपेथिक हो त ? रासायनिक विधिबाट निर्माण गरिएको औषधिलाई हामी एलोपेथिक भन्छौँ । तर यो त आयुर्वेदभन्दा पृथक्, आयुर्वेद विरोधी, आयुर्वेदसँग नमिल्ने कुरा त होइन । त्यसकारण यसलाई हामीले समायोजन गर्नुछ ।
आयुर्वेद महìवपूर्ण छ । हाम्रो नियमित खानपिन औषधिमय छ । हाम्रा पूर्वजले अनुभवजन्य प्रयोग सिकाएका छन्– जिराले ज्वरो आउन दिँदैन । बेसारले रोगको ‘एन्टिबायोटिक’को काम गर्छ ।
त्यसले आरोग्यता, निरोगिताको विकास गर्छ । बारीबाट फर्सीकोे मुन्टा, रायोको साग टिपेर ल्याउने, दाल, भात, अचार खाने हो । ‘फ्रिज’मा राखेर खाने हाम्रो परम्परा होइन । बासी खानुहुँदैन भन्ने हाम्रो परम्परा हो ।यसैले निरोगी नेपाल बनाउने कुरामा आयुर्वेद विधाको असाधारण महत्व छ ।
निरोगी नेपाल कसरी निर्माण गर्ने त ?
भविष्यमा पनि भाइरस आउन सक्छन् । हामीले निरोगी नेपाल, स्वस्थ नागरिक कसरी बनाउने ? प्रतिरोधी क्षमता ज्यादै बलियो भएका नागरिक कसरी बनाउने ? यसै पनि नेपालीसँग प्रतिरोधी क्षमता राम्रो छ, दह्रो छ । हामी लसुन, प्याज, अदुवा, मरिच, बेसार, टिमुर खाने गर्छौं, जसले शरीरलाई प्रतिरोधी क्षमता दिने, औषधि दिने, औषधीय गुणको काम गर्छ ।
मैले औषधि विज्ञानको कुरा गर्दा कतिपय मान्छेलाई चित्त दुख्छ । आयुर्वेदको प्रचार ग¥यो, बेसार, अदुवाको प्रचार ग¥यो।।। बेसार खाएर हुन्थ्यो भनेदेखि किन केही गर्नुपथ्र्यो ? भन्छन् । भोलि तिनले भात, रोटी खाएर हुन्थ्यो भने किन औैषधि खानुपथ्र्यो भन्नबेर लगाउँदैनन् ।
अहिले मलाई भुटेको मकै र भटमास खायो भने दाँत त्यसैसँग जाला कि भन्ने पीर हुन्छ । हाम्री हजुरआमाले नीमको डाँठले बिहानबेलुका दुई पटक ब्रस (दाँत माझ्ने) गर्नुहुन्थ्यो । नीमको डाँठले ब्रस ग¥यो भने सम्भवतः अरू कुनै औषधिले भन्दा बलिया दाँत हुन्छन् होला । हजुरआमा एकपटक पनि डाक्टरकहाँ जानुभएन । अलिकति ज्वरो आयो भने जिरापानी, टिम्मुरपानी केही उमालेर खानुहुन्थ्यो । यसले निको हुन्थ्योे ।
म गाउँमा जाँँदा एक जनाले भने– तपाईंको यो ‘एलर्जिक’ रुघा हो । बिहान, बेलुका दुई पटक, सक्नुहुन्न भने बिहान एक पटक नत्र बेलुका सुत्ने बेलामा धाराबाट पानी हातमा लिने, हल्का रूपमा स्वाट्ट नाक भित्रसम्म पु¥याउने होइन कि हल्का लिने र स्याक्स्याक् गर्ने र फ्याँकिदिने । त्यसो गरेर २०/२५ पटक नाक सफा ग¥यो भने तपाईंलाई रुघा लाग्न छाड्छ ।
होला र ? त्यही पनि गरिहालौँ भनेँ । अहिले रुघा लाग्दैन । त्यो नियमित गर्छु म । अब त्यसो नगर्दा रुघा लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन । त्यो एलर्जी भागेको ३०औँ वर्ष भयो । त्यस्तो घरेलु साधारण कुरामा स्वास्थ्यका कुरा निर्भर हुँदा रहेछन् । त्यसकारण दीर्घकालीन रूपमा निरोगी नेपाल बनाउन आयुर्वेदको विश्वास, विकास र प्रचार नै मुख्य कुरा हो ।
उपचार त गर्नैपर्छ । त्यसकारण हामीलाई एलोप्याथिक उपचार प्रणाली पनि चाहिन्छ । खुट्टा भाँचिएला, दुर्घटना होला, प्रसूति सेवाका केस होलान्, सर्जरी गर्नुपर्ला । आयुर्वेदमा सर्जरी विधा छैन । अब अहिले यो कोभिड–१९ मा दुईवटा पक्ष छन् । एउटा आयुर्वेद औषधि यस्तो बेलामा नितान्त प्रयोगात्मक मात्र गर्नुहुँदैन । मान्छे ‘गिनीपिग’ (प्रयोग मुसा) होइन । त्यसलाई प्रभावकारी हुने खालका, त्यसको पृष्ठभूमिमा अहिले प्रयोग गरिएर राम्रो नतिजा दिने प्रयोग गर्नजरुरी छ ।
मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु– थुप्रै कुराको उपचार एलोपेथिकभन्दा बढ्ता आयुर्वेद इफेक्टिभ (प्रभावकारी) छ । मेरो भाइ मृगी रोगले ग्रस्त थियो । दिनमा चार/पाँच पटक हुन थालेको थियो । डाक्टरलाई देखाउँदा, औषधि खुवाउँदा केही गर्दा पनि भएको थिएन । अब अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने स्टेजमा थियो । अप्रेसन गर्ने मात्र उपाय हो भन्ने थियो । एउटा सामान्य जोगी आइपुग्यो ऊ (भाइ) लडेर फट्याक फट्याक गरिराखेको बेलामा ।
अनि जोगीले भने बमोजिमको औषधि ९बुटी ख्वाउँदा०ले ठीक भयो । त्यस बेलादेखि २०औँ २५औँ वर्ष भयो, अहिलेसम्म एक पटक पनि उसलाई छारे रोग, मृगी भएको छैन । यो कुरा एलोपेथीले गर्न सक्दैन । जुन आयुर्वेदले प्रामाणिक रूपमा हाम्रै अगाडि गरेको छ । ती साधु को थिए रु कहाँबाट आएका थिए रु के औषधि थियो रु त्यो उनले बताएनन् पनि ।
यी कुरा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ । यो ९कोरोना­­० भाइरसलाई मा¥यो भने आयुर्वेदले मार्छ, अरू कुनै विधाले मार्दैन । मैले डक्टरको भेलामा पनि भनेँ– गाउँघरमा साबुन नहुन पनि सक्छ । त्यस कारणले हामीले साबुन पानीले हात धोऔँ भनेर मात्रै पनि पुग्दैन । साबुन छैन भने खरानी पानीले हात धोऔँ भन्दियो भने खरानी पानी साबुन पानीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
केही शताब्दी यता हामी बन्द समाजमा प¥यौँ– लकडाउन (बन्दाबन्दी) जस्तै । त्यसले हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका सारा पक्षमा हामीलाई पछाडि पारिदियो तर यही देशका विद्वान्ले अक्षर, अङ्क र शून्य आविष्कार गरे, बाँकी भूभाग अन्धकारमा हुँदा धर्तीको मात्रै होइन अन्तरिक्षका ग्रह नक्षत्र गनेर खगोलको अध्ययन गरेका थिए । के अधिक मासको याद हामीले गरेका थियौँ कि पुर्खाले ? चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आजकोे आविष्कार होइन ।
बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा हाम्रा पुर्खा अन्तरिक्षका तारा, नक्षत्र गनेर हिसाब किताब गर्दथे । गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त न्युटनले पत्ता लगाए भन्छौँ । उनीभन्दा अगाडि ग्यालिलियोले धेरै प्रयास गरे भन्छन् तर त्योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, पाँच/छ सय वर्ष अगाडि भाष्कराचार्यले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाएका थिए, पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए । उनले आफ्नो गणितबाट पृथ्वीको व्यास कति छ, पृथ्वीको गोलाइ कति छ ? निकालेका थिए ।
उतिबेला वैज्ञानिकले गणित भनेको नौ ग्रह, साइन्स (विज्ञान)ले पछि सात ग्रहभन्दा बढी मानेन । अलिक पछि आठवटा रहेछन् भनेर मान्यो, पछि नौवटा रहेछन् भनेर मान्यो । नवग्रह छन् भनेर विज्ञानले पछि मानेको हो ।
भाष्कराचार्यले ११५० मा नै ग्र्याभिटेसनको सिद्धान्त पत्ता लगाएका थिए र पृथ्वी गोलो छ भन्ने पत्ता लगाएका थिए । पृथ्वीको गोलाइ कति छ, चन्द्रमासँग दूरी कति छ ? ग्र्याभिटेसनको कारणले समुद्रको पानी किन ज्वार भएर उठ्छ आदि कुरा पत्ता लगाएका थिए । किन माथिबाट तल वस्तु झर्छ रु त्यो पत्ता लगाएका थिए । उनको ‘सिद्धान्त शिरोमणि’ भन्ने पुस्तक १२१० मा प्रकाशित भएको थियो ।
विचित्र के भने आज त्यसको विश्वभरि पढाइ हुन्छ, १२१० मा त्यसले भनेको कुरा दुनियाँ सुन्दैन । स्विजरल्यान्डमा जुन ‘ब्ल्याक होल’ भन्ने समयसम्बन्धी तीनवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन्, त्यसमा सहमति हुनु/नहुनु आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसमा भाष्कराचार्य लेखेको भेटियो । देवनागरी लिपिमा भाष्कराचार्य द्वितीय भनेर लेखेको छ । उनको नाम त्यहाँ लेखियो तर उनको योगदान के हो त ? खोइ त्यो योगदान ? अझै पनि हामी ग्र्याभिटेसनको नियम पत्ता लगाउने न्युटन भनिराखेको छौँ, जो छ सय वर्ष पछिको कुरा हो । हामीकहाँ जो छ त्यो प्रकट भएर पनि प्रकट हुन पाएन ।
हो, उम्रिएर पनि हाम्रै धर्तीभित्रै छ किनभने हाम्रोमा उम्रियो । हाम्रोमा उम्रिएको हुनाले उम्रिएको मानिएन , जसले थाहा पायो त्यसले छोपछाप पा¥यो । त्यो उसको ठाउँको होइन, हाम्रो ठाउँको हो । आजको जमाना हामीले आविष्कार गरेका ‘कपिराइट क्लेम’ गर्ने कुरा
गर्न सक्छौँ ।जस्तो चुरे शृङ्खलाको फेदमा पाइने कुचिला औषधीय गुण भएको ‘मेडिकल प्लान्ट’ हो भन्ने मानिन्छ । अन्यत्र दुनियाँमा पाइँदैन । यसको उत्पादन र व्यापार ग¥यौँ भने असाधारण उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने केही अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । यार्सागुम्बा अन्यत्र पाइँदैन । यार्सागुम्बा औषधि नै हो ।
आयुर्वेदिक ओरिजिनल (खास्सा– रैथाने) चिकित्सा प्रणाली हो । त्यसकारण यसलाई वैकल्पिकमा राख्न हुन्न । आयुर्वेदिक प्रणालीभित्र योग पनि पर्छ । आयुर्वेद औषधि विज्ञान मात्र होइन आरोग्य विज्ञान पनि हो । यी दुई पक्षलाई सुदृढ गर्ने काममा अलिकति अन्डरमाइन्ड (बेवास्ता) भएको छ । शिक्षा बजेटको वा चिकित्सा बजेटको दुई प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ । ९८ प्रतिशत अरू विधामा छुट्याइन्छ । बजेटको यस प्रकारको वितरणले हाम्रो निरोगी नेपालको सपना पनि पूरा हुँदैन । त्यस कारणले यसलाई सच्याइनुपर्छ नत्र निरोगी नेपाल बनाउन हामी सक्दैनौँ ।
अस्पताल भनेको अपरिहार्य परिआउँदा जाने ठाउँ हो नत्र साधारणतया हामीले जनतालाई निरोगी राख्ने हो । अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल हुँदै जान्छन्, प्राकृतिक नियम हो । त्यसको उपचार पनि खोज्दै जानुपर्छ । आकस्मिक रूपमा कतिपय दुर्घटना होलान्, यस्ता ट्रमाका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अस्पताल चाहिन्छ, परीक्षण गर्ने मेसिन चाहिन्छ । त्यसका निम्ति विशेषज्ञ,प्राविधिक चाहिन्छन् ।
कसरी हामी मेडिसिन उत्पादन गर्न सक्छौँ, कसरी हामी मेडिसिन प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो । प्राकृतिक हिसाबले प्राप्त गर्छौं भने आयुर्वेदिक औषधि नै हो । कृत्रिम ढङ्गले उत्पादन गर्छौं भने एलोपेथिक हो । अरू मेसिन, औजार, ल्याब, इक्युपमेन्ट, एक्सरे सबै कुरा एलोपेथिक होइनन् । रेडियम पत्ता लगाउँदा क्युरीले यो एलोपेथिक हो है भनेकी थिइनन् । ‘म्याटर अफ रेडिएसन’ ।
त्यो रेडिएसनमा न एलोपेथी न आयुर्वेदिक । त्यसकारण यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ । आधुनिक कुरालाई पनि यसमा मिसाउनुपर्छ ।
आयुर्वेदिक अस्पतालमा आएपछि नागरिक फर्किन नपरोस् । ट्याब्लेट, झोल आदिको गुणस्तर उपयुक्त होस् । यसमा सर्जरीको क्षेत्र (आस्पेक्ट) पनि हामी विकास गर्न सक्छौँ । सर्जरीको आस्पेक्ट मैले अघि हाम्रा शास्त्रीय परिकल्पना, मिथ जे होस्, परम्परागत कुरा हुन्– त्यसलाई पनि विकास गर्न सक्छौँ । समय लाग्छ । अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट अगाडि बढ्नुप¥यो । बालकृष्णकोमा जाँदा सबै ल्याब, मेसिन, इक्युप्मेन्ट राम्रा छन् । नाम नै पतञ्जलि आयुर्वेदका महर्षिको नाममा राखिएको छ । आयुर्वेद आचार्य भन्ने आयुर्वेदका गुरु हुन् तिनी । जसले आयुर्वेदलाई खास गरेर पछिल्लो समयमा चरक संहितापछि त्यस ढङ्गले विकास गरेको भनेर यिनलाई मानिन्छ । हामी पनि वेल इक्युप्ट हुनु जरुरी छ । आयुर्वेदिक अस्पतालमा आएपछि सामान्यतया मान्छे फर्किन नपरोस् । ट्याब्लेट, झोल आदिका गुणस्तर मात्रै फरक होउन् । त्यसको बनावटको विधि मात्रै फरक हो । त्यो कुरा हामी सबैले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ ।
मैले घरेलु विधि, आयुर्वेदिक विधि अपनाउने गर्छु । सुत्ने बेलामा बेसार पानी अनिवार्य खान्छु । मेरो सुगर भएको हुनाले गुर्जो अलिक खान्न । मरिच, तुलसीका पात अरू कुरा खान्छु । घाँटीमा बाफ लिन्छु । गार्वेल (घाँटीमा कुलुलु) गर्दा मनतातो पानीमा नुन राखेर गर्ने । मेरो ‘इम्युन’मा अत्यन्त ‘सप्रेस’ गरेको छ । त्यसकारण मैले इम्युन बढाउने औषधि पनि खानुहुँदैन । आफ्नो शरीरले एडप्ट गरिआएको ‘इम्युन डेभलप सिस्टम नेचुरल डेभलपिङ सिस्टम’ मात्रै हो । त्यसकारण यो सन्तुलन मिलाउन मलाई निकै गाह्रो छ ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ भदौ २५ गते आयुर्वेद विज्ञसँगको छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश ।)